Tanora masina Itaosy: nanolotra seho mendrika an’Andriamanitra | NewsMada
Tanora masina Itaosy: nanolotra seho mendrika an’Andriamanitra
Niavaka tamin’ireo hetsika vitsivitsy, tamin’iny faran’ny herinandro iny, ny notanterahina omaly tolakandro, tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Matihanina tanteraka ny antsa fiderana an’Andriamanitra, nataon’ny Tanora masina, ao amin’ny FLM Itaosy.
Niezinezina sy nanakoako ny fiderana an-kira an’Andriamanitra, nataon’ny sampana Kristianina tanora (KT), Tanora masina avy amin’ny FLM Itaosy, omaly tolakandro. Anisan’ireo antoko mpihira miavaka amin’ny maro eto an-dRenivohitra izy ireto noho ny feomanga ananan’ny mpikambana, izay efa manodidina ny 150.
Tamin’ity fampisehoana ity, 96 izy ireo no niara-nanandra-peo, noravahin’ny zavamaneno samihafa. Tsy niova fa toy ny fandre any amin’ny rakikira sy hita amin’ny fahitalavitra ny natolotr’izy ireo. Nanamafy izany ny fanamafisam-peo, raitra sy matihanina ary mifanaraka tsara amin’ny karazan-kira natao tao amin’ny lapan’ny Kolontsaina.
Nanolotra fampisehoana feno ny Tanora masina Itaosy. Ankoatra ny hira sy mozika, kanto ihany koa ny haingon-tsehatra sy ny ravaka samihafa, mbamin’ny jiro. Midika izany rehetra izany fa mendrika an’Andriamanitra sy feno fiderana Azy ny antsan-kira fiderana nataon’ity antoko mpihira fanta-daza ity.
Fiderana sy fanomezam-boninahitra no tanjona voalohany. Nisantarana avy hatrany ny fampisehoana ilay hira hoe “Masina ny anaranao”, narahina hofahofa tanana, niaraka tamin’ny mpanotrona. Rehefa vita ny fiderana, nampahatsiahivina indray fa tsy mba mandao amin’ny ady sarotra Andriamanitra, araka ilay hiran’ny Tanora masina hoe “Ianao tsy mba mandao”.
Toy izany koa ny “Raha mbola fitia”, manambara fa Andriamanitra dia fitiavana, izay tsy mitovy amin’izay heverin’ny ankamaroan’ny olona, satria fitia maharitra mandrakizay. Miisa 31 ireo hira natolotry ny Tanora masina. Ankoatra ny fampisehoana, nisy koa fivarotana ireo rakikira maro efa nivoaka.